MAP Radio FM 102.5 MHz - Agenda
MOU အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထိုင်းအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ရှိလာပါပြီ
MOU အရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ထိုင်းအစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်
၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိအကျုံးဝင်သည်။
၂။ ထိုင်းရောက် မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားလုပ်သားများအား အောက်ပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီအကျုံးဝင်စေသည်။
၂.၁။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဝေါ့ပါမစ်) သက်တမ်းရှိရမည်။
၂.၂။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ပတ်စပို့) သည် လျှောက်ထားသည့်နေ့ရက်တွင် သက်တမ်းရှိရမည်။
၂.၄။ ဝေါ့ပါမစ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ သက်တမ်းတိုးခြင်းလျှောက်ထားရမည်။
၂.၅။ ဝေါ့ပါမစ်သက်တမ်းကို (၂) နှစ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုထားပြီး နေထိုင်ခွင့် (ဗီဇာ) ကိုတစ်ကြိမ်လျှင် (၁) နှစ်သာသက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည်။
၂.၆။ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဝေါ့ပါမစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသူများကို ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိတပြေးညီ ဝေါ့ပါမစ်သက်တမ်းတိုးပေးမည်။
၂.၇။ ၃၁-၃-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့အတွင်း ဝေါ့ပါမစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်သူများကို ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ တပြေးညီသက်တမ်းတိုးပေးမည်။
၂.၈။ ဝေါ့ပါမစ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်သည့် ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နှင့် ၃၁-၃- ၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည့်လုပ်သားသည် MOU စနစ်ဖြင့်ခေါ်ယူခြင်းသာဖြစ်ရမည်။
၂.၉။ ၁၉-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ဝေါ့ပါမစ်သက်တမ်းတိုးခြင်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။
၂.၁၀။ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများသည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ရမည်။
၂.၁၁။ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို MOU စနစ်ဖြင့်ခေါ်ယူသည့်ပုံစံအတိုင်းဆောင်ရွက်စေပြီး တာဝန်ရှိသူမှ လျော်ညီသလိုညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၂.၁၂။ အလုပ်ရှင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့လုပ်သားခေါ်ယူခွင့်ရကုမ္ပဏီကသာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၂.၁၃။ တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများမှာ လုပ်သားအမည်စာရင်း (Name List)၊ အလုပ်ခန့်စာချုပ်၊ ပတ်စပို့စာအုပ်မိတ္တူ သို့မဟုတ်(ကိုယ်စားတစ်ခုခု)၊ ဝေါ့ပါမစ်မိတ္တူ သို့မဟုတ် (ကိုယ်စားတစ်ခုခု)၊ပါရှိရမည်။
မြန်မာအလုပ်သမားများနေရပ်ပြန်စရာမလို သက်တမ်း တိုးခွင့်ရရှိမည်ဟု ယနေ့တွင်ထိုင်းအလုပ်သမားညွှန်ချုပ်ပြောကြား
ဝပ်ပါမစ် နှင့် ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးမည့် (အဖွဲ့ ၃ ခု ) ရှိ
ကျဟာငန်မှ သက်တမ်း ၂နှစ်တိုးပေးမည်ဖြစ်သည် သို့သော် MOU ကို ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလုပ်ဆောင်ရန် အလုပ်ရှင် လုပ်ငန်းရှင်မှ နယ်မြေအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး(ကျဟာငန်)တွင် ဒမန်း(ခေါ်)အလုပ်သမားခေါ်စာတင်ရမည်ဖြစ်သည်
ကျဟာငန်ရုံးမှ စာရွက်ရရှိလာလျှင် ဆေးရုံသို့သွား၍ ကျမ္မာရေးစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည် ဆက်လက်၍ တောမောတွင် ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးရန်လုပ်ဆောင်ရမည်
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ခွင့်ကို( ၂)နှစ်သက်တမ်းတိုးပေးသည်ဆိုပေမယ့် ဗီဇာသက်တမ်းကို တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်နှစ်စာအတွက်ပဲ့ ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်
(တစ်နှစ်အတွက် ကုန်ကျငွေမှာ အစိုးရသတ်မှတ်ကြေး ၁၉၀၀ဘတ်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည် )
ဆက်လက်၍ ဝါ့က်ပါမစ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်(၂နှစ်စာအတွက်ကုန်ကျငွေ ၁၉၀၀ဘတ်ဖြစ်သည်)တဆက်တည်း ပန်းရောင်ဘတ်ရိုက်ရမည်ဖြစ်သည်(ကုန်ကျငွေ ၈၀ဘတ် ဖြစ်သည်)
CI,ခရမ်းရောင် အနီရောင်မည်သည့်စာအုပ်မဆို အနည်းဆုံးသက်တမ်း ၆လခန့်ရှိရမည်ဖြစ်သည် ။
(က) စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်၂၀၁၉
(ခ) နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက် ၂၀၁၉
(ဂ)မတ်လ (၃၁)ရက် ၂၀၂၀ စသည့်နေ့များ၌ သက်တမ်းကုန်မညိ့သူများဖြစ်သည်
အနီရောင်စာအုပ်ရှိသူများ တံဆိပ်ပြောင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် အစိုးရဌာနမှလုပ်ဆောင်ပေးမည်ကို စောင့်လုပ်လည်းရပါကြောင်း
(တံဆိပ်ပြောင်းရန်အတွက် ခကြေးငွေ မပေးရပါ)
ဩဂုတ်လ (၁၅)ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းကစ၍ လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါ၍ လာရောက်ကြပါရန်ပြောသည်။
Credit ...to Labour Hittai
မြန်မာလုပ်သား ၅၀ ကျော်လိုက်ပါလာသည့်ဘတ်စ်ကား မဲဆောက်လမ်းတွင် မီးလောင်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့အ၀င်မှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ၅၂ ဦး စီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ ဘတ်စ်ကားတစီး ဇွန်လ ၃၀ ရက်က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားကားကြီးဟာ မဲဆောက်မြို့ အ၀င်လမ်းမကြီးအမှတ် ၁၂ မဲဆောက်နဲ့ ကီလိုမီတာ ၆၀ ကျော်မှာ မနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်က ကားမောင်းနေစဉ် စက်ခန်းထဲက မီးလောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာရွှေ့ေ့ပြာင်း အလုပ်သမားတွေကတော့ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ ကြလို့ အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ မြန်မာအလုပ်သမား အမျိုးသား၄၂ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၉ ဦးနဲ့ ကလေး ၁ ဦး စုစုပေါင်း ၅၂ ဦးလိုက်ပါလာတာပါ။
မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေ လာရောက်တာဖြစ်ပြီး မဲဆောက်နယ်စပ်ကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြ၀တီမြို့သို့သွားရောက်ကာ နေရပ်ပြန်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပထွက် အလုပ်သမား ယခင်နှစ်များထက် ပိုများလာ
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြည်ပကို အလုပ်သမား ၂ သိန်းခွဲကျော်သွားခဲ့ပြီး အရင်နှစ်တွေ ကထက်တိုးလာတယ်လို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ပြောပါတယ်။
တတိယတနှစ်တာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်ပကိုထွက်ခွာတာဟာ အရင်နှစ်တွေကထက် ပိုပြီးများလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးမျိုးအောင်က “ပြီးခဲ့တဲ့ တတိယတနှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာဆိုရင် ပြည်တွင်း အစိုးရဌာနတွေမှာ ၉,၈၂၂ ဦး၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှာ ၂၃၇,၆၂၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၂၄၇,၄၄၃ ဦးကို ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်ရှာပေးနိုင်ခဲ့သလို ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလည်း အလုပ်သမား ၂၅၀,၆၉၉ ဦး စေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တို့နဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာဆိုရင် အလုပ်သမား ၃၂,၀၀၀ ကျော်၊ ပြည်ပ ၆၈၀၀၀ ကျော် ပိုပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြည်ပကို သွားချင်သူတွေအတွက် သတင်းအချက်အလက်တွေ ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
ပြည်ပရောက်အလုပ်သမားတွေနဲ့ သူ့မိသားစု ပြန်ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးဗဟိုဌာနရုံးကိုလည်း တနိုင်ငံလုံးမှာ ၁၅ ရုံးအထိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်း ဦးမျိုးအောင်က ပြောပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ အခု ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမ ၄ လအတွင်း ပြည်ပမှာ အလုပ်ရသူ ၈၉,၀၅၈ ယောက်နဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ၉,၈၅၅၁ ယောက် ရခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်ကနဲ့ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ပြည်ပမှာအလုပ်ရတာ ၂ ဆကျော်မြင့်လာတာပါ။
မနှစ်က ပြည်ပမှာ အလုပ်ရသူ ၆၆,၆၁၆ ယောက်နဲ့ ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ရသူ ၇၄,၅၁၄ ယောက် ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက ပြည်ပမှာ အလုပ်ရသူ ၄၂,၂၇၅ ယောက်နဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ၅၈,၆၀၂ ယောက် အလုပ်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်ပမှာ အလုပ်ရရှိထွက်ခွာတာဟာ နိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံကို တရားဝင်သွားရောက်တဲ့ စာရင်းတွေဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကို အများဆုံးသွားရောက်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ မလေးရှားက ဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်ပြီး သူ့နောက်မှာ ဂျပန်နဲ့ ကိုရီးယားဖြစ်ပါတယ်။
မဲဆောက်မြို့မဲသောင် ရပ်ကွက်ထိုင်းလ၀က နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပိတ်ဆို့စစ်ဆေး
ဒီကနေ့နံနက်ပိုင်း (၆) နာ၇ီအချိန်ကစပြီး ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့မဲသောင် ရပ်ကွက်မှာ တိုက်ခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွေနဲ့လမ်းမပေါ်မှာ သွားလာနေကြသူတွေပါထိုင်းလ၀က နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ တရားမ၀င် နေထိုင်နေကြတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀၀ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
SAW Credit 77 news
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနေရပ်ဒေသအသီးသီးသို့
ပြန်ကြမည် မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် မြန်မာနဲ့ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအရနေရပ်ပြန်အလုပ်သမားများ နေရပ် သို့ ပြန်ပါက ဘတ် ၁၀၀၀ ကုန်ကျပြီး ဆောင်ရွက်ရသည့်
အိမ်ပြန် တုံးကြီး (Re-entry) ထုရန်မလိုဘဲ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်း ၀င်/ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် အတွက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့်
အိမ်ပြန် တုံးကြီး ထုရန်မလိုဘဲ သတ်မှတ်စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံဖြင့် မိမိတို့၏ နေရပ်ဒေသများကိုပြန်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာ အပ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ယခင်နှစ်များတွင် နေရပ်သို့ ပြန်သည့်အလုပ်သ မားများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများအား ယခုနှစ်တွင်
ဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်-
(က) ထိုင်းနိုင်ငံ အလုပ် သမားဝန်ကြီးဌာနက သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အိမ်ပြန်ရန် သတ်မှတ်ရက်က ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ
၃၀ ရက်နေ့အထိသာ ခွင့်ပြု ထားသည့်အတွက် ယင်းကာလအတွင်းမှာ မပျက်မကွက် ပြန်လည် ၀င်ရောက်ရန်၊
(ခ) သတ်မှတ်ရက်ထက် စော၍ပြန်လိုသူများ အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ သက်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့
ပြန်လိုသူများအနေဖြင့် လည်းကောင်း ပုံမှန်အတိုင်း အိမ်ပြန်တုံး (Re-entry) ထုသွားကြရန်၊
(ဂ) ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အစိုးရမှ ဗီဇာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆင်ပြေစေရန် ကာလသတ်မှတ် ၍ ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ပေးထားသော်လည်း
မိမိတို့ အလုပ်ရှင်များထံမှ ခွင့်ရရှိသည့် ကာလထက် ကျော်လွန် နေထိုင်ခြင်းကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရန်
ခက်ခဲခြင်းတို့ နှစ်စဉ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် အလားတူ ပြသနာများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အလုပ်ရှင်မှ ခွင့်ပြုသော အလုပ်ပိတ်ရက်
အတိုင်းသာ နေထိုင်၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက် ကြရန်နှင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလုပ်ဝင်ရန် နောက်ကျလို သဖြင့်
မိမိတို့၏ အလုပ်ဌာနများသို့ ခွင့်တိုင်ကြားလိုပါကလည်း သေချာစွာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရန်၊
(ဃ) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အပါအ၀င် အခြားအရေးကြီးသည့် စာရွက် စာတမ်းများကို တာဝန်ရှိသူများ စစ်ဆေးစဉ် ပြသနိုင်ရန်အတွက်
ပြည့်စုံစွာ ယူဆောင်သွား ကြရန်နှင့် ရေစိုခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရေး အထူးဂရုပြုရန်၊
(င) အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျောက်ဆုံး ပျက်စီးပါက ယင်း မိတ္တူများဖြင့် ပြန်လည်လျောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့၏ နိုင်ငံကူး
လက်မှတ် အပါ အ၀င် စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို အနည်း ဆုံး နှစ်စုံခန့် မိတ္တူကူးထားပြီး နေရာခွဲကာ သိမ်းထားရန်လို အပ် သကဲ့သို့
တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ သိမ်းဆည်ထား ကြရန်နှင့် ပတ်စပို့တွင်ပါသည့် ကိုင်ဆောင်သူ ဖြည့်သွင်း ရမည့် စာမျက်နှာတွင်
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်း ထားရန်၊
(စ) နှစ်နိုင်ငံ သတ်မှတ်ထားသည့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှသာ ၀င်ထွက်ကြရန်နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနများမှ ရိုက်နှိပ်သော
အ၀င်တုံး နှစ်တုံး၊ အထွက်တုံး နှစ်တုံး ပြည့်စုံခြင်းရှိမရှိ စိစစ်ရန်နှင့် ပြည့်စုံမှု မရှိပါက သက်ဆိုင်ရာသို့ မေးမြန်းဆောင်ရွက်ရန်၊
(မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာ ပါရှိသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံ လ၀ကဌာနများတွင်
အ၀င်/အထွက် တုံးမထုခြင်း၊ တရားဝင် ၀င်ပေါက်များမှ ထွက်ခွာမှုမရှိခြင်း၊ အထူးသဖြင့် မဲဆောက်-မြ၀တီ လမ်းကြောင်းမှ
ပြန်သူများအနေဖြင့် တံတားပေါ်မှ ဖြတ်သန်းခြင်းမပြုဘဲ တံတားအောက်မှ လှေဖြင့်ကူးကာ ထွက်ခွာခြင်းနှင့် ၀င်ရောက်လာခြင်း ကြောင်း
လမ်းခရီးရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှ စစ်ဆေးချိန်တွင် နှစ်နိုင်ငံ အ၀င်အထွက် တံဆိပ်တုံးများ ပါလာမှုမရှိခြင်းကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊
ပြန်လည်စေလွှတ်ခြင်းများကို ယခင်နှစ်က တွေ့ကြုံခဲ့ရပါသည်။)
(ဆ) တရားဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသည့်ပစ္စည်းများ နှင့် Custom ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသော ပစ္စည်းများး သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုရန်၊
ထို့အပြင် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ညှိနှိုင်းမှုများအရ မဟာသင်္ကြန်ကာလအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထား
ပြည့်စုံစွာဖြင့် နေရပ်သို့ပြန်မည့် အလုပ်သမားများအနေဖြင့် အိမ်ပြန်ခရီးတွင် အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက အလုပ်သမားသံအရာရှိများထံ
ဖုန်းဆက်သွယ်မှုအပြင် Line၊ Viberနှင့် အလုပ်သမားသံအရာရှိရုံး၏ Facebookစာမျက်နှာဖြစ်သည့် LA-Thailand Pageတို့မှ
Phone | Viber | Line - 09 4884 5484
Phone | Viber | Line - 06 5220 6952
Phone | Viber | Line -06 5220 6951
Phone | Viber | Line - 06 5220 6953
Phone | Viber | Line - 09 9059 2352
ထိုင်းနယ်စပ်ဖြတ်ကူးခွင့်(၁)နှစ်သက်တမ်း စာအုပ်တာချီလိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများလုပ်ခွင့်ရရှိ
”ခရိုင်က မိတ္တူပို့လာပါတယ်။ ကမ်းကူးစာအုပ် တစ်နှစ်အတွက် မြို့ပေါ်သာမကကျေးရွာတွေအထိအပြင် တာချီလိတ်ခရိုင်တစ်ခုလုံးတစ်နှစ်သက်တမ်းရှိစာအုပ်လုပ်ခွင့်ရပါပြီ။
အသေးစိတ်ကတော့ခရိုင်ကနေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်”ဟုတာချီလိတ်မြို့နယ် လ၀ကဦးစီးအရာရှိဦးစိုင်းဆမ်တစ်က ယနေ့တွင်ပြောသည်။
”ဟုတ်ပါတယ်။ တာချီလိတ်ခရိုင်တစ်ခုလုံးပါဘဲ။ တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိစာအုပ်လုပ်ခွင့်ပါ၊ အရင်ကတော့ တာချီလိတ်မြို့ပေါ် တစ်ခုဘဲ လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ခုကတော့ ကျေးရွာတွေပါ ပါပါတယ်။
စ တာကတော့ ဒီနေ့စတာပါ။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကိုလည်း စာတွေပို့ထားပါပြီ`ဟု တာချီလိတ်ခရိုင် လ၀က ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ကျ အရာရှိတစ်ဦးကလည်း ပြောသည်။
ယခင်က ထိုင်းနိုင်ငံသို့(၁)နှစ်သက်တမ်းရှိစာအုပ်ဖြင့် သွားလာခွင့်ကို တာချီလိတ်မြို့ပေါ်(၁၁)ရပ်ကွက်ရှိ တရားဝင်အိမ်ထောင်စုဇယားပါသူများကိုသာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရာမှ ယခုအခါ တာချီလိတ်မြို့နယ် ကျေးရွာများသာမက တာချီလိတ်ခရိုင်ရှိမြို့နယ်များ၊ မြို့များ၊ ကျေးရွားများနေ ပြည်သူများအထိ စာအုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်။
”ပြည်ထဲရေးက ဒုဝန်ကြီးခရီးစဉ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခရီးစဉ်၊ စတဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာ ခုလို ခွင့်ပြုပေးဖို့ တင်ပြခဲ့တာပါ။
မြို့နဲ့ကျေးလက်ကွာဟမှုကအစ လူ့အခွင့်အရေးအရ ခွဲခြားသလိုဖြစ်နေတာကို မရှိအောင်လို့ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။
ကျန်တဲ့ခရိုင်တွေလဲ လုပ်ခွင့်ရလာဖို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်”ဟု ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်(၇)မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလုံစံခတ်က ပြောသည်။
တံတားကူးခွင့်စာအုပ်ဖြင့်ဆိုလျှင် တန်းစီစရာမလိုသည့်အပြင် ကမ်းကူးခမှာ ကျပ် ၃၀၀ သာရှိသဖြင့်လည်းကောင်း၊ နေ့စဉ်ကူးသန်းနေရသူများအနေဖြင့်
နေ့စဉ် တစ်ခါကူးလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀ ကျသင့်နေသဖြင့်ယခုခွင့်ပြုချက်က တာချီလိတ်ခရိုင်အတွင်းသက်ရောက်သည်ဖြစ်ရာတာချီလိတ်ခရိုင်အတွင်းနေပြည်သူများအနေဖြင့်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိလာစေသည်ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
”မြို့နဲ့ရွာခွဲခြားခံနေရတယ်လို့မြင်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ခရီးစဉ်တိုင်းမှာ တိုက်ရိုက်တင်ပြတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ တာချီလိတ်ခရိုင်သာမကပါဘူး၊ ရှမ်းအရှေ့သာမက ၁၃/ကိုင်ဆောင်သူ ရှမ်းပြည်နယ်သားတွေကိုလည်း စာအုပ်နဲ့ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ဖို့ တင်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်”ဟု တာချီလိတ်မြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်မောင်တင့်က ပြောပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့(၁)နှစ်သက်တမ်းရှိ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်စာအုပ်ပြုလုပ်ရာတွင် အိမ်ထောင်စုဇယား မူရင်း/မိတ္တူ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကပ်ပြား မူရင်း/မိတ္တူ၊ ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံနှင့်လူကိုယ်တိုင် ခရိုင်လ၀ကရုံးတွင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်တာချီလိတ်
ခရိုင်အတွင်းရှိ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်၊တာလေမြို့၊ ကျိုင်းလတ်မြို့များနှင့်ကျေးရွာများနေပြည်သူများအထိလုပ်ခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တာချီလိတ်မြို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံမယ်ဆိုင်မြို့နှင့်နယ်စပ်ချင်းထိတွေ့နေသည့်မြို့ဖြစ်ရာနယ်စပ်ချောင်းပေါ်တွင်ဖြတ်သန်းဆောက်လုပ်ထားသည့်ချစ်ကြည်ရေးအမှတ်(၁)တံတားမှတဆင့်နေ့စဉ် လူထောင်ချီဖြတ်ကူးနေသည့်အတွက် တစ်ရက်စာနယ်စပ်ယာယီဖြတ်သန်း
ခွင့်လက်မှတ်(TBP)အစားယခုလို စာအုပ်ဖြင့်ဖြတ်သန်းရပါကအချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ငွေကုန်သက်သာခြင်းတို့ကြောင့် ဒေသခံတို့အတွက် အလွန်ပင်အကျိုးရှိသည်ဟုဒေသခံများကပြောကြသည်။
Credit .......#Popular News Journal
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ခရိုင်အလိုက် ကွာခြားသည့် နေ့စာလုပ်အားခများ တနေရာနဲ့ တနေရာမတူညီတဲ့ လုပ်ခလစာ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ခရိုင်အလိုက် ကွာခြားသည့် နေ့စာလုပ်အားခများတနေရာနဲ့ တနေရာမတူညီတဲ့ လုပ်ခလစာတွေကို ရွှေရွှေ့ပြောင်းတွေသိရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါလေးတွေသိထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလုပ်လုပ်မယ့် နေရာမှာ ဘယ်လောက်ထိ ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိပြီး အလုပ်တွေသေချာရွေးလိုပ်နိုင်ပါစေလို့ Shwe Migrant ကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
- နရာထိဝါ့ခရိုင်၊ ယလာခရိုင်၊ ပတ်တနီခရိုင် = 308 ဘတ်
- စင်ဘူလီခရိုင်၊ နခေါ်စီထမလားခရိုင်၊ တလန်ခရိုင်၊ မဲဟွန်စွန်ခရိုင်၊ လန်ပန်ခရိုင်၊ လန်ဖူခရိုင်၊ ချင်းလိုင်ခရိုင်၊ စူခိုထိုင်ခရိုင်၊ ကန်ဖင်လ်ဖစ်ခရိုင်၊ ဖိကျီခရိုင်၊ ဥထိုင်ဌာနီခရိုင်၊ စီစကစ်ခရိုင်၊ တာ့ခ်ခရိုင်၊ ချိုင်ယဖူခရိုင်၊ အမ်နားကျလြွေခရိုင်၊ ဖဲခရိုင်၊ လားခ်ျဘူလီခရိုင်၊ ရနောင်းခရိုင်၊ မဟာစာရခမ်ခရိုင်၊ ချုဖွန်ခရိုင်၊ နောင့်ဘိုဝါလမ်ဖူခရိုင်၊ စတူခရိုင် = 310 ဘတ်
- လွိုက်အေ(စ်)ခရိုင်၊ ပလကျွစီလီခမ်ခရိုင်၊ နခွန်စ၀မ်ခရိုင်၊ စလကဲယို့ခရိုင်၊ ဖထလုံခရိုင်၊ ဥတတစ်ခရိုင်၊ ဥဒွန်ဌာနီခရိုင်၊ နခွန်ဖနုံခရိုင်၊ ဘူလီလမ်ခရိုင်၊ စူလင်ခရိုင်၊ ဖစ်ခ်ျဘူလီခရိုင်၊ ဖိစနုလိုးခရိုင်၊ ဖစ်ခ်ျဘူလ်ခရိုင်၊ ချိုင်နားခရိုင်၊ လိမ်ခရိုင်၊ ယစိုထွန်ခရိုင်၊ ဖယောင်ခရိုင်၊ ပီင်ကမ်ခရိုင်၊ နမ်ခရိုင်၊ ကမ်ကျနဘူလီခရိုင်၊ အန်ထောင်ခရိုင် = 315 ဘတ်
- ကျန်ထဘူလီ၊ စမူစွန်ခလမ်ခရိုင်၊ စကွန်နခေါ်ခရိုင်၊ မုတာဟန်ခရိုင်၊ နခွန်နာယွတ်ခရိုင်၊ ကာလစင်ခရိုင်၊ ပလာကျင်ဘူလီခရိုင် = 318 ဘတ်
- အူဘွန်လားခ်ျဌာနီခရိုင်၊ စူဖန်ဘူလီခရိုင်၊ စလဘူလီခရိုင်၊အယုထရာခရိုင်၊ နောင်ခိုက်ခရိုင်၊ လွတ်ဘူလီခရိုင်၊ တလခရိုင်၊ ခွန်ကင်ခရိုင်၊ စောင်ခလာခရိုင်၊ စူလားဌာနီခရိုင်၊ ကဘီခရိုင်၊ ချင်းမိုင်ခရိုင်၊ နခွန်လားခ်ျစီမာခရိုင်၊ ဖန်ငါခရိုင် = 320 ဘတ်
- ဘန်ကောက်ခရိုင်၊ နခွန်ပထုံခရိုင်၊ နွန်ထဘူလီခရိုင်၊ ပထုံဌာနီခရိုင်၊ စမူပလာကန်ခရိုင်၊ စမူစာခွန်ခရိုင်၊ ချချီစောင်ခရိုင် = 325 ဘတ်
- ဖူကစ်ခရိုင်၊ ချွန်ဘူလီခရိုင်၊ လယောင်ခရိုင် = 330 ဘတ်
အလုပ်သမားဥပဒေပြင်ဆင်ရာတွင် အလုပ်သမားဆန္ဒသဘောထား ပါဝင်ရေး ဆန္ဒပြ​
အလုပ်သမား ဥပဒေ​တွေပြင်ဆင်တဲ့အခါ အလုပ်သမားထုရဲ့ ဆန္ဒသဘောထား​တွေပါဝင်​ဖို့ မန္တလေးမြို့ ပြည်​ကြီးတံခွန်​မြို့နယ်​မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ မနက်​က အလုပ်သမား ၇၀၀ ​ကျော်​က ဆန္ဒပြ​တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်​။
အလုပ်သမားရေးရာ ဖြေရှင်းရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေ (မူကြမ်း) နဲ့ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ​တွေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေ (မူကြမ်း)​တွေမှာ အလုပ်သမားထုရဲ့ အသံများပါဝင်စေရေး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း​တွေကို အလုပ်သမားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရေး၊ ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်​တွေ ထည့်သွင်းပေးရေး စတဲ့အချက်​​တွေကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်​။
မြန်​မာနိုင်​ငံ စက်​မှုလက်​မှုနဲ့ ဝန်​​ဆောင်​မှုလုပ်​ငန်း​ပေါင်းစုံ အလုပ်​သမားများ သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်​က လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး (၁) ကိုနေလင်းအောင်က “ကျနော်တို့ ရန်ကုန်မှာလည်း တောင်းဆိုပြီးပြီ၊ ခုမန္တလေးမှာ ဆက်လက်တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ အလုပ်သမား ဥပဒေတွေမှာ အလုပ်သမားအသံတွေ မပါတာရယ်၊ အလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်တွေ အလုပ်ထုတ်ခံရမှု နှုန်းထား​တွေ မြင့်တက်​လာတာရယ်တွေကြောင့် အခုလို ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတာ​” လို့ ​ပြောပါတယ်​။
ဆန္ဒပြ​အလုပ်​သမား​တွေကို ပြည်​ကြီးတံခွန်​၊ ချမ်းမြသာစည်​၊ မဟာ​အောင်​​မြေမြို့နယ်​က မြို့နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှူး၊ မြို​နယ်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးနဲ့ တာဝန်​ရှိသူများက တားမြစ်​ခဲ့​ပေမယ့် ဆက်​လက်​ဆန္ဒပြ​တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်​။
“ကျ​နော်​တို့က သက်​ဆိုင်​ရာကို ငြိမ်းစုစီတင်​ခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့် ​ဒေသန္တရဥပ​ဒေအရ ခွင့်မပြုဘူးတဲ့။ ကျ​နော်​တို့အလုပ်​သမားတွေ မြို့နယ်​တိုင်းမှာရှိ​နေတယ်၊ အများအပြား အလုပ်​ဖြုတ်​ခံထားရတယ်။ ​အလုပ်​ဖြုတ်​ခံရတာကလည်း သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်​​တွေချည်းပါပဲ။ အမျိုးသားဒီမိုက​ရေစီ အစိုးရလက်​ထက်​မှာ အလုပ်​သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်​​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေ အလုပ်​ထုတ်​ခံရတဲ့နှုန်းထားက အင်​မတန်​မှ မြင့်​တက်​လာပါတယ်​။ ဒါ​တွေကို​လည်း​ ပြေလည်​​အောင် ​​ဖြေရှင်းမ​ပေးနိုင်​ဘူး။ ဒါ​​ကြောင့် အခုလိုဆန္ဒပြ​တောင်းဆိုရတာဖြစ်​တယ်” ​လို့ မြန်​မာနိုင်​ငံစက်​မူလက်​မှုနဲ့ ဝန်​​ဆောင်​မှုလုပ်​ငန်း​ပေါင်းစုံ အလုပ်​သမားသမဂ္ဂ အ​ထွေ​ထွေ အတွင်း​ရေးမှူးချုပ် ​ကိုသက်​နှင်း​အောင်​က ​ပြောပါတယ်​။
အလုပ်သမားတရားရုံးများပေါ်ပေါက်ရေး၊ လွတ်လပ်စွာ သင်းပင်းဖွဲ့စည်းရေး၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများအား အလုပ်သမားအငြင်းပွာမှု ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းရေး၊ အလုပ်သမား ဥပဒေများကို ILO စံနှုန်းနဲ့အညီ ပြင်ဆင်ရေး၊ မန္တလေးတိုင်းအတွင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီး ခန့်အပ်ပေးရေး စတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ ပြည်​ကြီးတခွန်​မြို့နယ်​ ၆၂လမ်း​အေးသုခလမ်းက​နေပြီး ချမ်းမြသာစည်​နဲ့ မဟာ​အောင်​​မြေမြို့်​နယ်​တို့ကိုဖြတ်​ပြီး လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
ခွင့်ပြုမိန့်မရဘဲ လမ်း​လျှောက်​​ဆန္ဒပြ​တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ ​ခေါင်းဆောင်​ ၇ ​ဦးဖြစ်​တဲ့ ကိုသက်​နှင်း​အောင်​၊ ကို​နေလင်း​အောင်​ ကိုတင့်ရှိန်​စိုး၊ ​ဒေါ်စုစုနိုင်​၊ ​မစိုး၊ စန္ဒမြင့် ​ဒေါ်ဖြိုးစန္ဒာစိုး ဦးသူရ တို့ကို ငြိမ်းစုစီပုဒ်​မ (၁၉)နဲ့ အမှုဖွင့်အ​ရေးယူသွားမယ်​လို့ မန္တ​လေးခရိုင်​ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးမျိုး​အောင်​က ​ပြောပါတယ်။
သရပါဟိုတယ်​ အလုပ်​ဖြုတ်​ခံ အလုပ်​သမားများ ၇ ကြိမ်​​မြောက်​ ဆန္ဒပြ
မန္တလေးတိုင်း၊ ညောင်​ဦးမြို့နယ်​၊ ပု​ဂံ​ရှေး​ဟောင်းယဉ်​​ကျေးမှု​ဒေသရှိ သရပါဟိုတယ်​မှ အလုပ်​ဖြုတ်​ခံရ​တဲ့ အလုပ်​သမားတွေဟာ အလုပ်အကိုင်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် သရပါဟိုတယ်​ အနီးမှာ မနေ့က ၇ ကြိမ်​ ​မြောက်​ ဆန္ဒ​ဖော်​ထုတ်​ခဲ့ကြပါတယ်။
​ဟော်​တယ်​ချစ်​သူ မြို့နယ်​လုံးဆိုင်​ရာ အလုပ်​သမားအဖွဲ့အစည်း HLOB ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းရွှေက “ဒီအလုပ်​ကို မလုပ်​လို့ ငတ်​သွားမှာ​တော့ မဟုတ်​ဘူး။ ဒါ​ပေမယ့် အလုပ်​သမား အဖွဲ့အစည်းကို ဖြိုခွဲတာ ​ပေါ်လွင်​တယ်​။ အခုလိုလုပ်​​နေရင်​ ​နောက်​ဆက်​တွဲ ​ဟော်​တယ်​​တွေမှာ လုပ်​​နေတဲ့ အလုပ်​သမား​တွေအ​ပေါ် ဖိနှိပ်​ခံရလာနိုင်​လို့ အခုလို ဆန္ဒ​ဖော်​ထုတ်​ရခြင်းဖြစ်​တယ်​”လို့ ပြောပါတယ်။
ဆန္ဒ​ဖော်​ထုတ်​ရာမှာ သရပါ ဟိုတယ်​မှ အလုပ်​ထုတ်​ခံရ​တဲ့ အလုပ်​သမား ​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ ပြန်​လည်​ခန့်​ထား​ရေး၊ မတရားအလုပ်​ထုတ်​ခြင်းများ ရပ်​တန့်​​ရေး၊ အလုပ်​သမားသမဂ္ဂ ဖြိုခွင်းသူများ အလိုမရှိ၊ ပုဂံ​ဒေသခံများအ​ပေါ် ဂုတ်​​သွေးစုတ်​ အမြတ်​ထုတ်​​သော ခရိုနီများအလိုမရှိ၊သရပါ ဟိုတယ်​​မြေအငှားချထားမှုအ​ပေါ် အစိုးရက ပြန်​လည်​စိစစ်​​ပေး​ရေး စတာတွေ ​ကြွေး​ကြော်​ပြီး အင်​အား ၃၀ လောက်နဲ့ ဆန္ဒ​ပြခဲ့ကြတာပါ။
HLOB မှ အလုပ်​အမှု​ဆောင်​ ဦးညိုက “မန္တ​လေးတိုင်း ဝန်းကြီးဌာနအဖွဲ့ က အဆင်​​ပြေ​အောင်​ကူညီ​ပေးမယ်​လို့ အာမခံထားပြီး အချိန်နှစ်လ ကြာတဲ့အထိ ​မျှော်​မှန်းသလို ဖြစ်​မလာဘူး။ လှုပ်​ရှားမှုတခုခုလုပ်​မှ အသိပြန်​ဝင်​မယ်​ဆိုတဲ့ အ​နေအထားနဲ့ ပြန်​လည်​ ​ဆောင်​ရွက်​ရခြင်းဖြစ်​တယ်​”လို့ ပြောပါတယ်​။
ပုဂံသရပါဟိုတယ် အလုပ်သမာတွေအနေနဲ့ အလုပ်ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက် ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်က စတင်ပြီး သပိတ်စခန်းဖွင့် တောင်းဆိုခဲ့ရာမှာ ၂လအကြာမှာ သပိတ်စခန်းဖြိုခွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှာလည်း သရပါဟိုတယ်က အလုပ်ထုတ်ခံအလုပ်သမားများ အပြင် ကြံ့နှစ်ကောင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံနဲ့ ပါဝါဓာတ်ခဲစက်ရုံက အလုပ်ထုတ်ခံ အလုပ်သမားတွေ စုပေါင်းပြီး ပုဂံကနေ နေပြည်တော် ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ရာမှာလည်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရပါတယ်​။
သပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်မှုကြောင့် ပုဂံသရပါဟိုတယ်အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ကိုနေမျိုးဝင်း အပါအ၀င် သပိတ်စစ်ကြောင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ထုတ်ခံ အလုပ်သမား ၁၃ ဦးတို့ ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ နဲ့ အမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်​။
မလေးရှားကိုခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မြန်မာ ၁၇ ဦး ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ဖမ်းမိ
မြန်မာ နိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံသား ၈၁ ဦးဖမ်းဆီးခံရ
ထိုင်းအစိုးရက မိဘမဲ့မြန်မာကလေးငယ်များကို ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေး
Adress : No. 1/5, Amina Uthit Road, Mae Sot, Tak 63110 Mae Sot,
Copyright © 2020 MAP Radio FM 102.5 MHz. All rights reserved.